We She Me: So You Think You Can Dance
Anonymous - 7/6/08, 6:44 PM
she has sense in music at this age & choose the melody that she likes. wonderful. btw, she getsalittle slim than b4.is she? we all r like aunty & uncle to her by reading wesheme posts :)
Anonymous - 7/6/08, 7:11 PM
မြတ်နိုးလေးက ချစ်ဖို့ အလွန်ကောင်း။ စကားပါ စပြောနေပြီဆိုတော့ သူ စကားပြောနေတာလေးတွေပါ ကြည့်ရရင် ကောင်းမယ်။ ဒီကောင် မူကြို မသွားသေးဘူးလား။
sandra - 7/7/08, 10:05 AM
သမီးလေးက က တတ်လိုက်တာနော်၊ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်
ကျွန်မ သမီးက မနေ့ကပဲ နှစ်နှစ်ပြည့်တယ် အဲလိုမျိုး မကတတ်ဘူး
Andy Myint - 7/9/08, 10:15 PM
ဟုတ်တယ် စာဖတ်သူ သူကြိုက်တဲ့ တီးလုံးကို မှတ်ထားတယ်။ အရပ်ထွက်လာတော့ နည်းနည် ပိန်သွားတယ်။
စကားကတော့ သိပ်မပြောတတ်သေးပါဘူး။ မူကြိုပို့မလို့ဟာ အဘွားက သနားနေတာနဲ့ မပို့ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
သမီးက အဲဒီလို ကတာပါပဲ မSandra။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တော့ ဘယ်တူမလဲ။ အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Myanmar armydog - 7/30/08, 8:52 PM
ခွီခွီ ကလေးတွေများ ကိုအန်ဒီငယ်ငယ်တုန်းကကောဒီလိုတတ်လား တီဗွီရှားတဲ့ခေတ်မို့လို့ တတ်မယ်မထင်ပါ ကိုအန်ဒီအဖေအမေကို မေးမကြည့်ဘူးလား
Andy Myint - 7/31/08, 8:59 PM
ကျွန်တော်တို့ တုန်းကတော့ ဘယ်တတ်လိမ့်မလဲ ကိုမြန်မာ...